Baiboly pejy 709 - Ny Baiboly
Voalohany < 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Fanambaràna toko 14 (tohiny)
20Nohosena teny ivelan'ny tanàna ny famiazana, ka rà nahadifotra hatramin'ny vin-damboridin-tsoavaly no nivoaka avy ao, sy nitobaka hatramin'ny enin-jato sy arivo stady.
Fanambaràna toko 15
Ny famantarana fahafito - Ireo anjely fito mitondra loza fito - Ny kapoaka fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra.
1Rahefa izany, dia nahita famantarana hafa sady lehibe no mahagaga tany an-danitra aho, dia anjely fito nitondra loza fito farany, fa amin'ireo no hanaperana ny fahatezeran'Andriamanitra.
2Ary nahita toa ranomasina fitaratra miharo afo aho; ka izay nandresy ny Biby sy ny sariny ary ny isan'ny anarany no nitsangana teo amoron'io ranomasina fitaratra io, mitana ny harp'Andriamanitra. 3Ny hiran'i Moizy mpanompon'Andriamanitra sy ny hiran'ny Zanak'ondry no nohirain'izy ireo, ka hoy izy: Lehibe sy mahagaga ny asanao, ry Tompo, Andriamanitra tsitoha! Marina sy mahitsy ny lalànao, ry Mpanjakan'ny taona mandrakizay! 4Iza no tsy hatahotra sy hankalaza ny anaranao, Tompo ô? Fa hianao irery no masina, ka ho avy hiankohoka eo anatrehanao ny firenena rehetra, satria niseho miharihary ny fitsaranao!
5Taorian'izany, indro hitako novohana ny tempoly nisy tranolain'ny fanambarana tany an-danitra, 6ka nivoaka avy tao amin'ny tempoly ny anjely fito nitondra ny loza fito; niakanjo rongonim-bazaha fotsy mamirapiratra izy ireo, ary nihetra fehin-kibo volamena nanodidina ny tratrany. 7Dia natolotry ny iray amin'ny Zava-manana aina efatra ny anjely fito ireto kapoaka volamena fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra, izay velona mandrakizay mandrakizay, 8ka feno setroka avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny ny tempoly; ary tsy nisy afa-niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatapitry ny loza fito nentin'ny anjely fito.
17Rahefa izany, nandraraka ny teo anaty kapoakany tamin'ny rivotra ny anjely fahafito, dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly, teo amin'ny seza fiandrianana, nanao hoe: Vita. 18Ka nisy tselatra sy feo ary kotro-baratra mbamin'ny horohoron-tany; tsy mbola nisy horohoron-tany mafy hoatra izany na oviana na oviana, hatrizay nisian'ny olona tety ambonin'ny tany. 19Nivaky telo tery ny tanàna lehibe, nirodana avokoa ny vohitry ny firenena maro; ary notsarovan'Andriamanitra i Babilona lehibe, mba hampisotroany azy ny kapoakan-divain'ny fahatezerany mirehitra. 20Ny nosy, nandositra daholo; ny tendrombohitra, tsy hita intsony, 21ary ny olona nilatsahan'ny havandra vaventy be avy any an-danitra sahabo ho lanjan-talenta iray ny iray, ka nanevateva an'Andriamanitra izy ireo, noho ny loza avy amin'ny havandra, fa loza lehibe loatra izany.
Fanambaràna toko 17
Ilay Vehivavy janga malaza, dia Babilona lehibe - Ny loha fito sy ny tandroka folon'ilay Biby itaingenan-dRavehivavy.
1Dia nanatona ahy ny iray tamin'ny anjely fito, ka nanao tamiko hoe: Avia, fa hasehoko anao ny fitsarana ilay Vehivavy janga malaza, mipetraka amin'ny rano lehibe maro, 2izay nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany, sy nahamamo ny mponina ambonin'ny tany tamin'ny divain'ny fijangajangany. 3Dia nentiny am-panahy nankany an'efitra aho, ka inty Vehivavy nitaingina Biby mivolon-jaky, feno anarana fanevatevana an'Andriamanitra, fito loha sy folo tandroka, no hitako. 4Lamba volom-parasy sy jaky no nitafian-dRavehivavy, volamena sy vato soa ary voahangy no niravahany, ary kapoaka volamena feno zava-betaveta no teny an-tànany, dia ny zava-maloton'ny fijangajangany izany. 5Nisy anarana, dia anarana miafin-kevitra voasoratra teo an-kandriny, nanao hoe: Babilona lehibe, Renin'ny fijangajangana sy ny zava-betaveta amin'ny tany. 6Hitako fa mamon'ny ran'ny olo-masina sy ny ran'ny martirin'i Jesoa io Vehivavy io, ka gaga loatra aho nahita azy.
7Ary hoy ilay anjely tamiko: Nahoana no gaga hianao? Indro hasehoko anao ny hevi-miafin'ilay Vehivavy sy ny Biby fito loha manan-tandroka folo. 8Ny Biby, ilay efa hitanao, dia teo ihany, ary tsy eo izao, nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hita noanoa izy ka hankany amin'ny fahaverezana. Ho gaga ny mponina ety an-tany, izay tsy mba voasoratr'anarana ao amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao, amin'ny fahitana ity Biby, noho izy teo ihany, ary tsy eo intsony, nefa mbola ho avy indray.
9Ary eto no ilana saina manam-pahendrena. Ny loha fito dia tendrombohitra fito izay ipetrahan-dRavehivavy, sady mpanjaka fito koa ireo: 10ny dimy moa efa lavo, ny iray dia eo, ny iray mbola tsy tonga, ary rahefa tonga izy dia tsy maintsy hitoetra kelikely. 11Ny Biby izay teo kosa, nefa tsy eo intsony, no fahavalo, sy anisan'izy fito ihany, ary mankany amin'ny fahaverezana. 12Ireo tandroka folo efa hitanao indray, dia mpanjaka folo tsy mbola nahazo fanjakana, nefa handry fahefan'ny mpanjaka sy hiara-manjaka ora iray amin'ny Biby. 13Miray hevitra izy ireo, ary manolotra ny hery amam-pahefany amin'ny Biby. 14Hiady amin'ny Zanak'ondry izy rehetra, nefa ho resin'ny Zanak'ondry, satria izy no Tompon'ny tompo, sy Mpanjakan'ny mpanjaka, ary ny voantso sy olom-boafidy sady mahatoky no momba azy.
15Izao koa, hoy izy tamiko: Ny rano efa hitanao nipetrahan-dRavehivavy janga, dia olona amam-bahoaka sy firenena aman-tsamihafa fiteny maro. 16Ny tandroka folo efa hitanao tamin'ilay Biby kosa, no hankahala an-dRavehivavy janga, ka hampijaly sy hampitanjaka azy, ary hihinana ny nofony sy handevona azy amin'ny afo. 17Fa Andriamanitra efa nanome fo azy ireo hanatanteraka ny heviny, sy hanome ny fanjakany ho an'ny Biby, mandra-pahatanteraky ny tenin'Andriamanitra. 18Ary Ravehivavy hitanao no ilay tanàna lehibe, izay mifehy ny mpanjakan'ny tany.
Fanambaràna toko 18
Rava Babilona lehibe - Ny isaonan'ny mpanjaka sy ny mpandrato azy - Ny anozonan'ny anjely iray azy.
1Taorian'izany, dia hitako nidina avy any an-danitra ity anjely anankiray hafa koa, nanam-pahefana lehibe, sy nanazava ny tany tamin'ny voninahiny. 2Niantso tamin'ny feo mahery izy, nanao hoe: Rava, rava Babilona lehibe, ka tonga fonenan'ny demony, sy fitoeran'ny fanahy maloto rehetra, ary fieren'ny vorona maloto halan'ny olona rehetra!
Pejy: Voalohany < 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3535 seconds